March 2015 | ကမ်းလက်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 3/31/2015 - No comments
အနောက်က သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးလျင် ထိုသဘောတူညီမှုအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်က သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးရာမှာ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူခြင်းသာဖြစ်ပြီး ထိုသဘောတူညီမှုထဲမှာ ပြင်ဆင်စရာ၊ ဖြည့်စွက်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတတ်သည်။
(ကစ်ဆင်းဂျား။ world order)
ကဲ မြန်မာအစိုးရရဲ့ သဘောတူညီမှုက ဘယ်လို သဘောတူညီမှုလဲ။
သမိုင်းက ပြောပြနေတာကတော့ ဒုတိယအမျိုးအစားပါ။
စောင့်ပဲကြည့်ရမယ့် သဘောပဲ။ ဦးရဲထွဋ် ဝမ်းသာသလောက် လေ့လာသူတွေကတော့ ဝမ်းမသာလောက်သေးဘူး။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 3/31/2015 - No comments
မြန်မာဘုန်းကြီး ကျောင်းထိုင်ဖြစ်တော့ ဒီကျောင်းမှာ သီဟိုဠ်သံဃာ ဆက် ပြတ်တော့မယ်၊ မြန်မာသင်္ကန်းရောင်ပဲ လွှမ်းသွားတော့မယ်လို့ နိမိတ် ဖတ်သူတွေ၊ စိုးရိမ် ပူပန်သူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့ အထင်တွေ မှားကြောင်း၊ စိုးရိမ်စရာ မရှိကြောင်းသိသွားကြတယ်။
ကိုယ်တိုင်မေးကြည့်မိတာက "မြန်မာကျောင်းကြီး (တိုပါးရိုး) မှာ မြန်မာ ဆရာေ တွ တစ်ပါးမှမရှိတော့ဘဲ သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးတွေချည်းပဲ ရှိနေရင် မြန်မာတွေ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ" ဆိုတာပါပဲ။
ဒီမေးခွန်းဟာ အဖြေတစ်ခု ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ဆိုရင် ဒီမိုဂရပ်ဖစ် ဘဲလန့်စ် (လူဦးရေဟန်ချက်) မပျက်စေရဘူးပေါ့။ မြန်မာ သိပ်များသွားရင် သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးတွေသာမက တရုတ် ဒကာ၊ ဒကာမတွေကပါ စိုးရိမ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက လူ့သဘာဝပါ။ (အမေရိကမှာ မက္ကစီကန်တွေ၊ ဥရောပမှာ မွတ်စလင်တွေ၊ မြန်မာမှာ ရိုဟိန်ဂျာနဲ့ တရုတ်)
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအောက်မှာ ရေရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲမျိုးတွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက် နဲ့ပါ။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်ကာလလို အခြားကျောင်းတွေအတွက် အကြပ် အတည်း ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် လုပ်လိုက်မိမယ်ထင်ပါတယ်။
(သင်္ကြန် မလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့ အမေးတွေကို ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ ယူဆပါတယ်)
နော်မက်ဒစ်ရဟန်းတစ်ပါး၏ ခိုလှုံရာ အရိပ်
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 3/31/2015 - No comments
သမိုင်းနုနု နိုင်ငံငယ်လေးမှာ ကျောင်းတော်ရဲ့ ခရီးက ယနေ့ ၅၅ နှစ်မြောက် ခဲ့ပြီ။
၅၅ နှစ်မှာ မိမိနှင့်ဆက်စပ်မိသည့်ကာလကပင် ၁၃ နှစ်ထဲ ဝင်လာခဲ့ပြီ။ ဤမျှ ကြာလိုက်သည် မထင်မိ။
ဤကျောင်းသည် အတည်မကျ နော်မက်ဒစ်ရဟန်းတစ်ပါး၏ ခိုလှုံရာ အရိပ် လည်း ဖြစ်နေခဲ့သည်။
နိုင်ငံငယ်က ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကို စုစပ်ပေးထာသလို ကျောင်းတော်က လည်း ထေရဝါဒအောက်မှာပင် မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများကို နွေးထွေး စွာလက်ခံထားသည်။
ကိုယ်ကပေးတာတွေရှိသလို ကိုယ်ကရတာတွေလည်းရှိသည်။ ထိုအရာများစွာတို့တွင် ကိုယ်တိုင် သင်ယူလိုက်မိသည့် မတူပေမဲ့ အတူနေလို့ ရသည်ဆိုသည့် Co-exist သဘောတရားက ဘဝအတွက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သင်္ခန်းစာပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု။ ။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, ရွှေပြည်ကြီးအကြောင်း - on 3/30/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Ko Wun Tho's photo.
Labels: ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, ရွှေပြည်ကြီးအကြောင်း
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 3/30/2015 - No comments
နန္ဒ စိုးစံ။ ။ လီကွမ်ယုလို..ခေါင်းဆောင်မျိုး မြန်မာန်ိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရင်..
.ကြိမ်းသေပေါက်မြန် မာနိုင်ငံဟာ..စက်ာပူလိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလားအရှင်ဘုရား..။
Zin Wai Thaw။ ။ ဒါက ဆောင်းပါးရေးမှ ရမှာ။ အစွမ်းရှိသူမို့ မြန်မာပြည်လို ဆိုရင် မတူတဲ့ ပေါ်လစီချလာနိုင်တယ်။ လီကွမ်ယုကို စင်ကာပူအောင်မြင်မှုနဲ့ တင် တိုင်းလို့ မရပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော် ကုမ္ပဏီတွေမှာ အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ထဲ ပါနေတာ၊ အာရှအရေးမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ ခေါင်းဆောင်တွေ သူ့ဆီက အကြံဉာဏ်တွေယူကြရတာ တွေအထိ ကြည့်မှရမယ်။
သမ္မတကြီး အောင့်သက်သက်ပြန်ရပြန်တဲ့ စင်္ကာပူ ဒုတိယအခေါက်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 3/30/2015 - No comments
ပထမအခေါက်တုန်းကတော့ ဧည့်ဆောင်၊ ဧည့်စောင့်ခန်းမထဲက ခြေေ ထာက်နဲ့ ကြမ်းပြင်မထိတဲ့ ထိုင်ခုံမှာ စကားစမည်ဖွဲ့သူမဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ရင်နာ၊ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ "ကျန်ကျောင်းနဲ့ကျောက်စီဓါး" စတေးတပ်လေးတွေ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
အခု အခေါက်လည်းအောင့်သက်သက်ဖြစ်စရာ၊ အားမလို အားမရဖြစ်စရာ အနည်းဆုံး အကြောင်းနှစ်ချက်တော့ ရှိနေနိုင်တယ်။
၁။ လီကွမ်ယု ကွယ်လွန်မှုအတွက် ဝမ်းနည်းကြသူတွေက စင်္ကာပူနိုင်ငံ သားတွေ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေသာမက မြန်မာလူထုအများစုကကိုပဲ ဝမ်း နည်းတကြီးဖြစ်နေကြရတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာကအဘရွှေတို့ အုပ်စုတွေနဲ့ စင်္ကာပူက အဘလီကိုလည်း ပက်ပက်စက်နှိုင်းယှဉ်လာကြတယ်။ အမေကျော် ဒွေးဒေါ်လွမ်းလို့ပြောဖို့တော့ မသင့်လှဘူးထင်ပါတယ်။ လီ ဟာ တကယ်ကို အလုပ်လုပ်ပြသွားတဲ့ လူပါ။
၂။ ကတော့ သမ္မတအပါအဝင်အားလုံးဟာ တန်းမဝင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ် ကြောင့် အားငယ်နေ (အားမလို အားမရဖြစ်နေ) နိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ သံတမန်တချို့လည်းပါတယ်။ သူတို့ဆီက ထွက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ် အသံထွက်က တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်(နှစ်ခါ ကြုံဖူးလို့ပါ)။ စင်္ကာပူကတောင် ဒီပွဲကို တက်ရောက်လာသူတိုင်းဟာ အနည်းဆုံး အင်္ဂလိပ် လိုတော့ ရပြီးသားလို့ မှတ်ယူထားတယ်။ အခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ပြောရင် ဘာသာပြန်ပေးပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုတော့ ဘာသာပြန်ပေးတာ မတွေ့ရဘူး။ လုံးစေ့ပတ်စေ့နားမလည်ရင် အတော်ကြာမယ့် ဈာပနအခန်းအနားပါ။
သဘာဝကျကျတွေးရင်တော့ ဖြည့်ဆည်းစရာတွေ၊ ပြင်ဆင်စရာတွေ တထွေးကြီးနဲ့ ပြန်သွားရမယ့် ခရီးပါ။
လူတိုင်းသေပေမဲ့ သေသူတိုင်းရဲ့ ဈာပနက မတူဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 3/30/2015 - No comments
ဒီနေ့ စထရိတ်တိုင်းမ်းမှာ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးရှည် နှစ်ပုဒ်တောင်ပါဝင်ပါတယ်။
ပုံ ၁ နဲ့ ၂ က နိုင်ငံရေး ကမောက်ကမတွေ ရှိနေတဲ့ကြားကပဲ စီးပွားရေး အကောင်းမြင်ဝါဒရှိနေကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ တိုးလာနိုင်ကြောင်း၊ စင်္ကာပူက ဘဏ်နှစ်ခုလည်း အခြေကျနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တိုးလာနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ (ဦးရွှေမန်းတို့က တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တိုးပြီးတောင်နေပြီ)
၃ နဲ့ ၄ ကတော့ စီးပွားရေးကနေ နိုင်ငံရေးဆီ လက်ညှိုး လှမ်းထိုးပြလိုက် တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆောင်းပါးပါ။ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းအချစ်တော် ဦးဝိရသူပေါ့။ ကောင်းပါတယ်၊ စထရိတ်တိုင်းမ်းက အင်တာဗျူးတော့ အင်တာနေရှင်နယ် သတင်းစာကြီးမှာ သူပြောချင်တာလေးတွေ တရားဝင်ပြောခွင့်ရတာပေါ့။
ပုံ ၄ ကတော့ ကိုယ့်လာမှန်မှာစိုးလို့ ငုံ့ရှောင်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကို "ာသည်"လို့ ခေါ်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမေးကို "ဒီတစ်ခါလာရင် ဖိနပ်နဲ့ပေါက်မှာ" လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ ခံယူသွားသူကိုတော့ သူ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြည့်ပြီး
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 3/29/2015 - No comments
အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ ခံယူသွားသူကိုတော့ သူ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြည့်ပြီး မဟာယာန၊ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမျှဝေခဲ့ကြတယ်။
ကဲ တင်းပြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခံယူထားကြတဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေကိုရော ဘယ်လို အမျှဝေကြမလဲ။ လုပ်ရပ်တွေ စောင့်ကြည့်ကြရအုံးမှာပေါ့လေ။
Memorial service for Lee Kuan Yew
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 3/29/2015 - No comments
ဘာသာပေါင်းစုံရှိသည့်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိ ဘာသာကို ဖွင့်မပြောခြင်းက အခြားဘာသာဝင်များနှင့် ဆက်ဆံ၊ စည်းရုံးရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ပေသည်။ သူကိုယ်တိုင် ကတော့ Nominal Buddhist ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။ နောက်ပြီး ဇင်၊ သတိပဋ္ဌာန်နှင့်ဆက်စပ်သည့် မက်ဒီတေးရှင်းလည်း ပုံမှန်လုပ်သည်ဟု သိရ သည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ကို အမျှဝေမှုမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 3/29/2015 - No comments
Brainwave ဥာဏ်လှိုင်း's photo.
Labels: ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, နိုင်ငံရေး ဂျုတ်
in Ven Cittara - on 3/29/2015 - No comments
မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်းနှင့် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း သက်ဆိုင်သူများသို့....
မစ္စတာ လီကွမ်ယုအားရည်စူး၍ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးစံနှင့်အည်ီ အသုဘဘာဝနာ၊ မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းနှင့် ရေစက်ချ၊ အမျှပေးဝေခြင်း အစီအစဉ်များကို မတ်လ၊ ၂၉ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၌ အောက်ပါအတိုင်း သင်တန်းများအလိုက် ပြုလုပ်သွားပါမည်။
အချိန်။ ။ မနက် ၁၀ နာရီ။
သင်တန်း။ ။ Sunday Dhamma Class။ (In English)
အချိန်။ ။ မနက် ၁၁ နာရီ။
သင်တန်း။ ။ ပုံမှန်ဝတ်တက်သူများ။ ပါဠိကောလိပ်။ (In English)
အချိန်။ ။ ညနေ ၅ နာရီခွဲ။
သင်တန်း။ ။ အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း။ (မြန်မာဘာသာဖြင့်)
(first image Credit: Chan Chun Sing)
Labels: Ven Cittara
ဒီနေ့ဝတ်ပြုပွဲမှာ ပြောမယ့်အချက် ၃ ချက်
in ဇင်ဝေသော်, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 3/29/2015 - No comments
၁။ ၁၉၆၅ ခုမှာ လီကွမ်းယု ကျောင်းကိုရောက်လာဖူးသည်မှလွဲပြီး တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှု မရှိ။
၂။ သူကိုယ်တိုင် Nominal Buddhist လို့ဝန်ခံထားတဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၃။ တရားရှုမှတ်ခြင်းကို စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်း သင်ပေးသင့်သည်ဟု အဆိုပြုဖူးသူ။ (ဘာသာစုံနိုင်ငံမှာ သဘောတူညီမှု လုံးဝမရနိုင်သည့်အကြံပြုမှု)
Labels: ဇင်ဝေသော်, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု
in ဇင်ဝေသော် - on 3/28/2015 - No comments
ဆွမ်းစားအပြီး ဒကာမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အရိုးပြာမျှောဖို့ ကျန်ရစ်သူမိသားစု နဲ့အတူ စင်္ကာပူပင်လယ်ထဲ ရောက်ခဲ့တယ်။
၁။ ရေတပ်နဲ့လေတပ်ပေါင်းပြီး မနက်ဖြန်အတွက် ရီဟာဆယ်တွေ လုပ်နေကြလေရဲ့။ ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်မှုကို စိုးရိမ်ဟန်တူပါရဲ့ တိုက်လေ ယာဉ်တွေ ကင်းထောက်နေတာလည်း တွေ့ရတယ်။ F-16 တွေ ထင်တာပဲ ဝဲနေတာ။ (မနေ့က မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ရေးပြသလို လှေထမ်းပြီး ကုန်းပေါ်မှာပြေးနေတာမျိုး မတွေ့ရဘူး)။
၂။ အရိုးပြာမျှောဖို့ကိုပဲ ပင်လယ်ကမ်းခြေကနေ ၂ မိုင် ၃ မိုင်လောက် စက်လှေ နဲ့ သွားရတယ်။ သတ်မှတ်ချက် အကွာအဝေးရှိတယ်။ ပစ်ချင်ရာပစ် မရဘူး။ မဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပင်လယ်ထဲ မပစ်ချရဘူး။
၃။ ပင်လယ်ပြင်မှာတောင် မလေးရှားပိုင်နက်နဲ့ စင်္ကာပူပိုင်နက် မတူဘူး။ စင်္ကာပူပိုင်နက်ထဲမှာ ရေသန့်ဗူးခွံ၊ ဘီယာဗူးခွံတွေ ပေါလောပေါ်နေတာ မရှိဘူး။
မစ္စတာလီရဲ့ နောက်ဆုံးစာအုပ် "လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်" ထဲက မြန်မာ
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 3/28/2015 - No comments
ဒီနေ့ မစ္စတာလီရဲ့ နောက်ဆုံးစာအုပ် "လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်" ထဲက မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မစ္စတာလီရဲ့ အမြင်ကို အမှတ်တရ ပြန် လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း
ရှေ့ဆက်ဖို့လမ်းဆုံးနေပြီဆိုတာသိတဲ့နောက်တော့ အကျိုးအကြောင်းညီညီ စဉ်းစားတတ်ရင် ရွေးစရာက တစ်လမ်းပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒါက နောက် လှည့်ပြန်လျှောက်ဖို့ပါ။ ၂၀၁၁ ခုမှာ သူတို့နိုင်ငံ ဘယ်ကို ဦးတည်ရမလဲဆို တာနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ချို့ဆန္ဒဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်၊ ဘယ် လိုစတင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ နည်းလမ်းတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။
ကျနော့််အမြင်အရပြောရရင် ဦးနှောက်ကောင်းတွေကို စနစ်တကျရှာဖွေ၊ ရွေြး ခယ်၊ မွေးမြူပြီး ရုတ်တရက် ကြီး “ဂ”ငယ်ကွေ့ ချိုးကွေ့ လိုက်တာမဟုတ်သလို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ အမြင်မှန် ရပြီး ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားနေရင်တော့ ပြိုလဲကျသွားတော့မှာပဲဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး သူ တို့နာမည်ကို အဖတ်ဆယ်ယူဖို့ မဖြစ်မနေပြောင်းလဲ လိုက်တာမျိုးတောင် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီထက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ရှင်းပြလို့ ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးေ တွ တွေ့မြင်လိုက်ရတာာက သူတို့နိုင်ငံကတော့ လမ်းဆုံးကိုရောက်နေပြီ။ ရွေးစရာ (ဆက်သွားစရာ လမ်း) ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဆီ နယ်ခြားလေးကိုကျော်ပြီးကြည့်လိုက်မိ တယ်ဆိုရင်ပဲ ဒီအမြင်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။ သဘာဝ အရင်း အမြစ်အနေနဲ့ကြည့်ရင် ထိုင်းနိုင်ငံထက်ပိုပြီး မချမ်းသာဘူးဆိုရင်တောင်မှ ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တော့ မြန်မာလည်း ချမ်းသာပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံလုံးကထွက်တဲ့ ရှောက်ချိုသီးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် ပါ။ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးထားတာ ဖြစ်နေတော့ ထိုင်းက ထွက်တဲ့ ရှောက်ချိုသီးက အလုံးပိုကြီးသလို ချိုလည်း ပိုချိုတယ်။ နောက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ဒီဒေသတွင်းမှာ သစ်ခွပန်း၊ ပန်းပင်၊ သစ်သီးတွေ တင်ပို့ရာမှာ နံပါတ်တစ် ဖြစ်နေပါတယ်။ သီအိုရီအရပြောရရင် ရာသီဥတုနဲ့ မြေသြဇာ ကြွယ်ဝမှုက နှစ်နိုင်ငံလုံး ကံကောင်းစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတော့ ထိုင်းစိုက်ပျိုး လို့ရနိုင်တာမှန်သမျှ မြန်မာပြည်မှာလည်း စိုက်ပျိုးနိုင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာ မှ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ နောက်ထပ် စိတ်မကောင်းစရာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်စရာတစ်ခု က ထိုင်းနိုင်ငံက ဆေးဝါးတွေရရှိဖို့ နယ်ခြားကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကျောက်မျက် ရတနာ ထွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ လဲလှယ်ယူနေကြရတယ်။ မြန်မာက အများ ကြီးနောက်ကျကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကိုခံလိုက်ရခြင်းဟာ စစ်တပ်အရာရှိတွေကိုရော မြန် မာပြည်သူလူထုကိုပါ လှုပ်နှိုးလိုက်တာပါပဲ။ ၂၀၀၈ ခုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီဘေး ဒဏ်ကြောင့် သန်းပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဘာလုပ်လို့ ဘာ ကိုင်ရမှန်းမသိတဲ့ အစိုးရဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထိထိရောက်ရောက် ကူညီေ စာင့်ရှောက်မှုမပေးနှိုင်သလို စိတ်လိုလက်ရ အကူအညီပေးလိုတဲ့ အမေရိ ကန်၊ ပြင်သစ်စတဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့ အကူအညီကိုလည်း လက်မခံခဲ့ ကြပါဘူး။
သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်သာဓက ကတော့ တရုတ်ပြည်၊ စီချွမ်း (Sichun) ပြည် နယ်မှာ လှုပ်သွားတဲ့ ငလျင်ပါ။ အပျက်အစီးအရ မြန်မာပြည်အောက် မရောက်ပါဘူး တရုတ်ပြည်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေက ချက်ချင်းေ ရာက်သွားပြီး ကယ်ဆယ်မှု ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ လုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ တရုတ်ခေါင်းဆောင် ပရီးမီးယား ဝင်ကျားပေါင်ကိုယ်တိုင် ဒါကို အဓိက ဦး စားပေးအနေနဲ့ ဦးဆောင်လုပ်ပြလိုက်တော့ တစ်နိုင်ငံလုံး တက်ညီလက်ညီ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ နာဂစ် မုန်တိုင်း အန္တရာယ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ စိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးရေမှတ်ကိုရောက် သွားပြီး ပြောင်းလဲမှု၊ အစပျိုးပေးလိုက်တာလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ သုံးသပ်ချက်ဟာ အမှန်တရားးနဲ့ မဝေးလှဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၁ ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့် နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်လာပါတော့တယ်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီအထဲမှာ အောင်ဆန်ုးစု ကြည် လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုဘယ်ဆုတံဆိပ်ရှင် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၁၂ ခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်အရွေးခံခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ သူမလည်း အရွေးချယ်ခံရပြီး ပါလီမန်ထဲရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီး တဲ့အခါမှာလည်း ခပ်သွက်သွက်ပဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဆက်ပြီး လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ရပ်ကတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေကို စီးပွားရေးပြန်ဖွင့်ပေးလာအောင် စည်းရုံးလုပ်ဆောင် မှုတစ်ခုပါ။ ဒီအချက်ဟာ နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိထားကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်း အစပထမတော့ တွန့်ဆုပ်ဆုပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပေးလာခဲ့ကြတယ်။
၂၀၁၂ ခု နိုဝင်ဘာလထဲမှာ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာပြည်ကို အလည်ရောက်လာချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ် အပြည့်အဝရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၅ ခုမှာ အမှန်တကယ်လွပ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ရွေးေ ကာက်ပွဲကျင်းပလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရပေမဲ့ စစ်အစိုးရက လုံးဝအသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခု ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှာ ပထ မဆုံးကျင်းပနိုင်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် ပုံမှန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိလာနေပါတယ်။
၁၉၆၀ ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာ ဆိုရှယ် လစ်လမ်းစဉ်ကို လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဗြိတိသျှအစိုးရက စီးပွားရေးလုပ် ဖို့ခေါ်သွင်းလာတဲ့ အိန္ဒိယန်းတွေကို အိန္ဒိယပြန်ပို့ခဲ့တယ်။ အဲဒီ အိန္ဒိယန်းတွေ က စီးပွားရေးနဲ့ ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ သူတို့ကိုပြန်လွှတ်၊ တံခါးပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေအချင်းချင်းပဲ စီးပွားရေးလည်ပတ်နေတော့ နိုင်ငံလည်း နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်လောက် သေသွားတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေထဲမှာ ဥာဏ် ရည်ဥာဏ်သွေး အထက်မြက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ခင်ညွှန့်နဲ့ ကျွန်တော်အဆက် အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေထဲမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ စိတ် ဝင်စားတာလည်း သူတစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဆူဟာတို့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့ သူ့ကို ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ စစ်ဝတ်စုံကိုချွတ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်အောင်လုပ်၊ လူထု ရဲ့ထောက်ခံမှုရလာပြီဆိုရင် စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်လိုက်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြီးလို့ မကြာခင်မှာပဲ ခင်ညွှန့်လည်း အဖမ်းခံလိုက်ရပြီး နေ အိမ် အကျယ်ချုပ် အချခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက် မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ကျွန်တော်လည်း အဆက်အသွယ်မရှိတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည် သွားပြီး တိုက်တွန်းနေလို့လည်း စင်္ကာပူအတွက် အကျိုးအမြတ် ဘာမှမရှိနိုင် ဘူးလို့လည်း သုံးသပ်မိပါတယ်။
နိုင်ငံတော်တော်များများကြိုးးစားခဲ့ကြပြီး ဘယ်သူမှလည်း အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ အလုပ်ဟာ ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်လို့ မထင်တော့ပါဘူး။
ဒကာကြီး စင်္ကာပူရောက်ခိုက် ရှယ်လိုက်ဦးမယ်
in ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 3/27/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Aye Lin's photo.
(စင်္ကာပူ ကျွန်းနိုင်ငံလေး တစ်နိုင်ငံကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ လောက်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးက အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး
နှစ် ၅၀ ကြာသည်ထိ တိုးတက်မှုမရှိ ငတ်ပြတ်လာတော့ စင်္ကာပူ ပြည်သူတွေက ကွန်ပလိန့်တက်(အပြစ်တင်) ကြရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ဒီလိုပြောမယ်ထင်တယ်။)
-ကျနော်တို့မှာ ရေတောင်လုံလောက်အောင် မရှိဘူး။
-ပထဝီဝင်အနေအထားအရ တဖက်မှာ မလေးရှား နဲ့ အခြားတဖက်မှာ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုတဲ့ လူဦးရေများတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေရှိနေတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံကြီးတွေက တလက်မမှ မကျူးကျော်အောင် ကျနော်စစ်တပ်ကြီးနဲ့ ကာကွယ်နေရတယ်။
-နောက်အဲဒီနိုင်ငံတွေက မွတ်ဆလင်တွေဖြစ်နေလို့ ဘာသာရေးအရလည်းကာကွယ်နေရတယ်။ လိုအပ်ရင် အရိုးကို စည်းရိုးထိုးပြီးကာကွယ်ရအုန်းမယ်။
- ဂျိုရောင်း နဲ့ ဝု(ဒ်)လင်း ဘက်က မလေးတွေကတမျိုး၊
ဆီရန်ဂူး နဲ့ မူစတာဖာ ဘက်မှာရှိတဲ့ တမီလ်ကုလားတွေကတမျိုး၊
ချိုင်းနားတောင်း ဘက်မှာရှိနေတဲ့ တရုတ်တွေကတမျိုး နဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးလည်းလုပ်နေရသေးတယ်။
နောက် မရင်နာဘေး ဘက်မှာလည်း အင်ဒိုနီးရှားက်ို စောင့်ကြည့်နေရတယ်။
-သူများနိုင်ငံတွေလို သယံဇာတ တွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။
-ဒီတော့ ပညာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာမပြောနဲ့။ ပညာရေးဟာ ငွေဖြုန်းနေတာပဲ။
-အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် တံငါအလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကြစမ်းပါ။ ငါး ပုဇွန်များများဖမ်းနိုင်တဲ့တနေ့ တိုင်းပြည်ချောင်လည်လာမှာဘဲ။
-ခုလို ဘာမှမရှိတဲ့ ကျွန်းလိုတိုင်းပြည်ကို အနစ်နာခံပြီး မပြိုကွဲအောင် ထိန်းပေးထားတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရကို ကျေးဇူးမကန်းပါနဲ့။
-အဲ တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာ အာဏာထိပါးရင်၊ နိုင်ငံတော်ကိုအကြည်ညိုပျက်စေရင် အစိုးရအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကိုသည်းခံမှာမဟုတ်ဘူး။
ခင်ဗျားတို့မှာ ပြေးစရာမြေမရှိဘူး။ ပြေးစရာ ပင်လယ်ရေထဲပဲရှိတယ်။
သူတို့ ဒိုင်ယာလော့ဂ် ခိုးတင်တာ
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 3/27/2015 - No comments
"အော် စင်္ကာပူက ဆရာတစ်ယောက် ရေးတာ၊ အခု သူသေသွားပြီ"
"သေတာက အင်တာဗျူးဖြေသွားတဲ့ လီကွမ်းယုပါ။ ဘာသာပြန်တဲ့လူက မသေသေးဘူး"
"ဟုတ်လား၊ သူက မသေသေးဘူးလား"
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 3/27/2015 - No comments
သမိုင်းထဲက "Holy Roman Empire" နဲ့ပတ်သက်လို့ ဗော်လ်တိုင်းယားက
"Neither Holy, Nor Roman, Nor an Empire" လို့ အဓိပ္ပါယ်ပါပါ သရော်ခဲ့ပါတယ်။
(ဟင်နရီ ကစ်ဆင်းဂျား (World Order, Page 14)
ဒါဆို "ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားလွှတ်တော်" ဆိုတာကိုရော ဘယ်လိုပြောကြမလဲ။
ဒီကရှေ့ ဟင်နရီ ကစ်ဆင်းဂျားရဲ့ World Order ထဲက စာပိုဒ်လေးတွေ တက်လာစရာ ရှိပါတယ်။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 3/27/2015 - No comments
ရင့်ကျက်တဲ့အစိုးရတွေဆီကပဲ ဒီလိုစကားမျိုးတွေ ကြားရတတ်တယ်။
Yes, we made the mistake. We are deeply sorry about that.
ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ ဇင်ဝေသော်အတွက် သတ်မှတ်ချက်
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 3/27/2015 - No comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဘာမှန်းမသိသေးဘူး။ ဒါက ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ ဇင်ဝေသော်အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ ဘယ်လို သတ်မှတ်လိုက်သလဲဆိုတာတောင် မသိဘူး။။
Location - Living In:Singapore
Interests:Politics and social issues, Poetry, Higher education.
Mr Lee soundingagiant bell onavisit to the Shwedagon Pagoda in January 1986.
in လီကွမ်းယု, အမှတ်တရ - on 3/27/2015 - No comments
Labels: လီကွမ်းယု, အမှတ်တရ
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 3/26/2015 - No comments
(၁ နဲ့ ၂) ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဈာပနတက်ရောက်မယ့် နိုင်ငံခေါင်းေ ဆာင်တွေထဲမှာ မြန်မာရဲ့ (ဦး)သိန်းစိန်ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရလို့။ နောက်ပြီး သူတို့ပြောတဲ့ ယူလော်ဂျီ (Eulogy) ဆိုတာ သေဆုံးသူရဲ့ ကောင်းကွက်ကို ထုတ်ဖော်ချီးကြူးရင်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်သူတွေကို စိတ်သက်သာ ရာ ရစေခြင်းမျိုးပါ။ သတင်းစာထဲက ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
(၃) ကတော့ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်ကိုပဲကြည့်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုကို မျက်ကွယ်ပြု၊ အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ ဩစတေးလျကို လီ ပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။ အာရှထဲဝင်လာတဲ့ လူဖြူအမှိုက်သရိုက် တဲ့။ ဦးလှဆွေစကားနဲ့ဆိုရင် ပိသာလေးကြီးပေါ့။
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 3/25/2015 - No comments
သူများပုံ ကူးတင်တာပါဗျာ။ မူပိုင်ရှင်ကို ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်။ ဘူမှန်းတော့မသိ။
ဒကာကြီး ဦးလှဆွေတော့ လုပ်ပြီ။
in ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 3/25/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Hla Swe's photo.
"မြန်မာ ဗိုလ်ချပ်ကြီးတွေကို ငါလည်း လက်မြှောက်ထားရတာ"
"သူတို့အထဲမှာ ခင်ညွန့်က ခေါင်းအကောင်းဆုံး"
"မြန်မာပြည်အကြောင်း ငါ့ကိုဆက်မမေးနဲ့တော့" ဆိုတာတွေတော့ မကိုးဘဲ ချန်ထားခဲ့တယ်။
လီကွမ်းယူ ရဲ့နိူင်ငံရေး အမြင် သုံးသပ်ချက်တွေက ပိဿာလေးနဲ့ ဘေးပစ် သလို အကြားရဆိုးပေမဲ့ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ သူ့သမိုင်းမှာ အထင်အရှားပါ ။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 3/25/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Brainwave ဥာဏ်လှိုင်း's photo.
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 3/25/2015 - No comments
အရင်နေ့မနက်က မီးဖိုထဲဝင်သွားတော့ ထမင်းချက်အဖွားကြီးနဲ့ သန့်ရှင်းရေး အဖွားကြီး ရယ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဘာရယ်နေကြတာလဲမေးတော့ ချက်ချင်း မဖြေဘူး။ ခဏနေတော့မှ သန့်ရှင်းရေးအဖွားကြီးက "လီကွမ်ယု ဆုံးပြီ" တဲ့။ ငါသိသားပဲ၊ ဒါက ရယ်စရာမှမဟုတ်တာဆိုတော့မှ
"ဟီး.....၊ တိုတိုနံပတ်ဝယ်မလို့၊ ဘယ်ဂဏန်း ဝယ်ရကောင်းမလဲပြောပြီး ရီနေကြတာ။ ဘန္တေ ဘယ်နံပတ်ကောင်းသလဲ" မေးလို့
"၉၁ ပေါ့ဟ" လို့ ဖြေထားခဲ့တယ်။
မနေ့က မနက်ကတော့ "အဲဒီဂဏန်းက ပိတ်နေပြီ၊ ဝယ်မရတော့ဘူး" တဲ့။
Labels: သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 3/25/2015 - No comments
၁။ မြန်မာအစိုးရက လာမယ့် နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ ဥရောပ သမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်က စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကို ဖိတ်မယ်ဆိုပဲ။ မဆိုးဘူးပေါ့။ ယုံကြည်မှုလည်း ရှိနေဟန်တူတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ပေါင်းရင် ဥရောပလည်း နည်းနည်းတော့ အရှက်ရတတ်တယ်။ ဥရောပက လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေ ကျောင်းသားတွေကို တုတ်နဲ့ ၀င်ရိုက်ပါလေရော။
၂။ မနှစ်က ထိုင်းထဲခိုးဝင်လာတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံသားလည်းဆိုတာ သောကြာနေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမတဲ့။ ဖြစ်နိုင်တာက တရုတ်ပြည်၊ ရှင်ကျန့်ပြည်နယ်၊ သူတို့နာမည်တွေက တူရကီနာမည်တွေတဲ့။ တူရကီလို့လည်း ၀န်ခံကြသတဲ့။ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး နည်းနည်းကြောက်တတ်တဲ့ ထိုင်းကတော့ ပေါက်ဖော်ကြီးဆီသွားပြီး အကြံတောင်း၊ ပေါက်ဖော်ကြီးပြောသလို ဆုံးဖြတ်မယ့်သဘောပါ။
၀ိဘဇ္ဇပဲ့တင်သံ - ရဟန်းစာဆိုများ
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 3/24/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared ဓမ္မ ဂင်္ဂါ's post.
စာမူပေးဖို့ မေ့နေတာနဲ့ သူတို့စာအုပ်က အရင်ထွက်သွားပါလေရော။
My lecture note - Dependent Origination (Paticcasamuppada)
in 3D ဘာသာရေး, Ven Cittara - on 3/24/2015 - No comments
Avijja= Ignorance of the Four Noble Truths. Ignorance of the past, future and both past and future. (Dependent Origination)
Sankhara= conditioning activities or mental formations. Immoral, moral and unshakable volitions. All moral and immoral thoughts, words and deeds are included in Sankhara.
Wisdom is predominant in supramundane state and volition is predominant in mundane state.
Ignorance is predominant in immoral activities and is latent in moral activities.
Vinnana= Re-linking or rebirth consciousness, 19 in number. All 32 resultant consciousness are also implies by the tern, Vinnana. Re-linking consciousness+sperm, ovum cells of parents.
Nama, Rupa= Mind and matter or corporeal organism. It can be mind alone, matter alone or both mind and matter.
Nama here means the aggregate of feeling, perception and mental states.
Rupa means body, sex and seat of consciousness.
Sex is determined by past kamma.
Salayatana= six senses bases, gradually evolve from these psycho-physical phenomena.
Phassa= contact between senses and respective objects. At the same time, respective consciousness.
Vedana=Feeling or sensation, pleasurable un-pleasurable and neutral feelings.
Tanha= Craving, for sensual pleasure, for existence and non-existance.
Upadana=Grasping for sensuality, False views, Adherence to rites and ceremonies, the theory ofasoul.
Bhava= becoming. Kamma bhava, an active process of becoming and Upapattibhava, the passive process of becoming. Both are kammic activities.
Jati, jara, marana etc. Birth, Aging, Death etc.
Labels: 3D ဘာသာရေး, Ven Cittara
လုပ်မနေနဲ့၊ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူး
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 3/24/2015 - No comments
နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်မြင်တဲ့စင်ကာပူကို ရလိုက်တယ်။
ဒီအတွက် လျော်ကြေးပေးလိုက်ရတာက ကျနော့် ဘ၀။
လုပ်မနေနဲ့၊ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူး။
ကျနော် တကယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာက ရှေ့နေ။
စင်္ကာပူနတ်လည်း "ကိုင်" တတ်သည် (နောက်ဆက်တွဲ)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 3/24/2015 - No comments
(ရှေ့ပိုင်းက 4/10/2013 နေ့မှာ တင်ခဲ့သော ပို့စ်အဟောင်းဖြစ်ပေသည်)
နာနာဘာဝပြီးလျင် နောက်ထပ်ရှင်းရခက်သည့်ကိစ္စက နတ်ကိုင်ခြင်းဟု ထင် သည်။ ယုံရလည်းခက်၏၊ သို့သော် ရှိပုံလည်း ရ၏။ အနည်းဆုံး ခူးတိတ်ပွပ် မိသားစုအတွက်တော့ ဤ ကိစ္စသည် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ထားရစ်ခဲ့သည့် မှာတမ်းဖြစ်လေသည်။ မစ္စတာ ခူးတိတ်ပွပ်က နှယ်နှယ်ရရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်၊ စင်္ကာပူ၏ အချမ်းသာဆုံးအုပ်စုတွင်ပါသည်။ ရီရွှန်းမှာ မကြာမီက ဖွင့်လှစ်ခဲ့ သည့် ခူးတိတ်ပွပ်ဆေးရုံက ( Khoo Teck Puat Hospital Singapore - KTPH )သူ့အမည်ပင်ဖြစ်သည်။
နတ်ကိုင်ခြင်း စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်က ကိုယ်တိုင်ပင် စင်္ကာပူမရောက်သေး၊ ရှေး ပျံလွန်တော်မူခဲ့သော သီရိလင်္ကာဆရာတော်ကြီး လက်ထက်ကဖြစ်သည် ။ ဖြစ်ပုံက အလုပ်သမားများက သစ်ပင်စောင့်နတ်ကို တောင်းပန်ခြင်းစသည် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ခုတ်လှဲပုံရ၏။ ထိုအခါ ထိုသစ်ပင်စောင့်နတ်က ဒေါ်ခူးတိတ်ပွပ် ကို ဝင်ကိုင်လေတော့သည်။ ရုတ်တရက်ကြီး လေဖြတ်သလိုလဲကျသွားသည်။ စကားလည်း မပြောနိုင်တော့ပေ။ သူဌေးများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဆေးရုံကို ချက်ချင်း သွားကြသည်။ ဆေးရုံးမှာလည်း ရောဂါ၏ အရိပ်လက္ခဏာကို ရှာဖွေ လို့မရ။ နောက်ဆုံး သီရိလင်္ကာဆရာတော်ကြီး၏ ဩဝါဒကို ခံယူရန် ရောက် လာကြသည်။ ဆရာတော်က ဤကိစ္စမျိုး ဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ထိုထို သစ်ပင်စောင့်နတ်ကို တောင်းပန်၊ မေတ္တာပို့လျှင် ရကြောင်းရှင်းပြပြီး သူ ကိုယ်တိုင် အိမ်သို့ကြွကာ ဘာသာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မကြာမီ ချက်ချင်းပင် ဒေါ်ခူးတိတ်ပွပ်လည်း ပကတိအတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
"သစ်ပင်ခုတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်မီ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုပင့်ပြီး မေတ္တာအရင် ပို့ စေရမည်" က မစ္စတာ ခူးတိတ်ပွပ်၏ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် လိုက်နာရန် ထား ရစ်ခဲ့သည့် မှာတမ်းဖြစ်လေတော့သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် သူတို့အိမ်ထဲ ရောက်ဖူးစဉ်က အလွန်အံ့ဩမိသည်။ စင်္ကာပူ လို နိုင်ငံပေါက်စလေးမှာ ဤမျှ ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးဖြင့်နေသူ မရှိနိုင်လောက် ဟု ထင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ခြံဝင်းက ရန်ကုန်ကခြံဝင်း များနှင့် ပင် မတူ။ တောင်ကြီး၊ မေမြို့စသောနယ်မြို့များကခြံဝင်းများနှင့်ပင် တူနေသည်။ မြေကမညီ၊ ခြံဝင်းအလယ်က ကုန်းကမူပေါ်မှာ တိုက်အိမ် အတွဲ လိုက်ဆောက်ထားသည်။
ပတ်ပတ်လည်က သစ်ပင်ကြီးများဖြင့်အုပ်ဆိုင်းနေပြီး တောအုပ် သဖွယ် ဖြစ်ေ နသည်။ နတ်ကိုင်မည်ဆိုက ကိုင်လောက်ပေသည်ဟု သစ်ပင်ကြီးများကို ကြည့် ရင်း တွေးလိုက်မိသည်။
ခူးတိတ်ပွပ်ရှိစဉ် ဘာသာယုံကြည်မှုက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး မင်္ဂလဝိဟာရ လေး ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ပြီးမြောက်ရေးအတွက် အလှူငွေ များစွာပါ ဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုတော့ မိသားစုထဲမှာ အခြားဘာသာယုံကြည်မှု များလည်း ရှိနိုင်သည်ဟု တွက်ဆလို့ရသည်။ သို့သော် မည်သည့်ဘာသာဝင် မျိုးဆက်သစ်မဆို တညီတညွတ်တည်း လိုက်နာကြရသည်က မစ္စတာ ခူးတိတ် ပွပ်၏ "သစ်ပင်ခုတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်မီ ဘုန်းတော် ကြီးကိုပင့်ပြီး မေတ္တာ အရင်ပို့ စေရမည်" ဖြစ်လေသည်။
(မတ်လ ၂၁ ရက်၊ စနေနေ့ကတော့ မစ္စတာ ခူးတိတ်ပွပ်၏ ၁၁ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နှင့် သစ်ပင် သုံးပင် ခုတ်လှဲရန်ရှိသည်ဟု ပင်လျှောက်သဖြင့် သွားခဲ့ရသည်။
ကျန်တာတွေ မထူးဆန်းသော်လည်း နောက်ဆုံး သူတို့ ခုတ်ဖြတ်မည်ဆိုသော သစ်ပင်ငယ်ကို မြင်ရသည့်အခိုက်မှာတော့ အနည်းငယ် ရယ်ချင်သလို ဖြစ် သွားခဲ့ရသည်။ အကြောင်းက ထိုသစ်ပင်သည် လက်ကောက်ဝတ်လောက်ပင် မရှိ၊ နွယ်ပင်သာသာလေးသာ ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်တည်း။ "ရှေးထုံးမပယ်နဲ့" စကားပုံကို တရုတ်လူမျိုးများက အတော်လိုက်နာတတ် ကြလေသည်။
ထိုမှနောက် "သွင်" မိသားစုကပ်လှူသော နေ့ဆွမ်းကို သွားရောက် ဘုန်းပေး လိုက်သည် ဟူလေ၏)
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 3/23/2015 - No comments
ဟန်တင်တန် သေဆုံးချိန်မှာ လူရာဝင်ချိန်နောက်ကျတဲ့ ကျနော်က ဟန်တင်တန်ကို လွမ်းရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ဘူး။ သာမန်လူတစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်သွားသလောက်ပဲ ခံယူမိခဲ့တယ်။
လီကွမ်ယု ထွက်ခွာချိန်ကတော့ ကျနော့် အသိ အပျံသင်စနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတော့ ပိုလွမ်းမိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြာလေလေ ဟန်တင်တန်ကို လေးစားလေလေ။
သူတို့နှစ်ယောက်က အသိခေါက်ခက် ဂလိုဘယ်ပေါ်လစ်တစ်ကို ခပ်ထူထူ ကျနော်လိုကောင်ကိုတောင် ဝိုးတဝါးတော့ မြင်အောင် ပြောပြနိုင်တယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 3/23/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Ko Ko Lwin's post.
နှိမ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုလိုနီတော်လှန်ရေးခေတ်မှာပဲ ပညာမတတ်လည်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သီအိုရီက မှန်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာထဲမှာ သူတင်ကိုယ်တင်ဖိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် လက်ရှိ အနေအထားနဲ့ "Simply not good enough" ပါ။ ဒီလောက်နဲ့ မရပါဘူး။
စင်ကာပူကို အမှီလိုက်မယ်ဆိုသူများ သိထားကြဖို့ပါ ....
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဖခင်ကြီး ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယု ဟာ University of Cambridge နဲ့ London School Of Economics က ကျောင်းဆင်းတယောက်ပါ ။
ဒုတိယမြောက်ဝန်ကြီးချပ် ဂိုချောက်တောင် ကUniversity of Singapore M.A ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
တတိယမြောက် ဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းဟာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီး University of Cambridge က သင်္ချာ ဘွဲ့ ၊ Harvard University က Master of Public Administration ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်က သမ္မတ ဟောင်း နေဝင်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ အိုင်အေထိပဲ ကျောင်းနေခဲ့ပါတယ် ။
ဗိုလ်စန်းယုက ဆေးကျောင်း တဝက်တပျက်တက်ခဲ့ပြီး ။
ဗိုလ်စိန်လွင်က ၆တန်း အထိကျောင်းနေခဲ့ပါတယ် ။
ဒေါက်တာမောင်မောင်က ပထမဆုံးဥပဒေဒေါက်တာဘွဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဗိုလ်သန်းရွှေက ၁၀တန်းအထိကျောင်နေဖူးပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် မတက်ဖူးပါ
ဗိုလ်သိန်းစိန် ရွှေမန်း မင်းအောင်လှိုင်တို့သည် DSA မှကျောင်းဆင်းလာသော သူများသာဖြစ်ပါတယ် ။
Image Source: The Straits Time
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 3/23/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Ashin Kavissara's photo.
ကျနော့်ဘဝရဲ့ အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးတွေက စင်္ကာပူကို ကိုယ်ကျင့်တရား မပျက်တဲ့နိုင်ငံ၊ အရည်အချင်းကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသားတိုင်း သာတူညီမျှ ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ လူထုကို စည်းရုံးခဲ့ရတာတွေပါ။ ဒါတွေက ကျနော်သေတဲ့နောက်အထိ ကျန်နေရစ်မယ့် အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေတွေရှိနေရင် စင်္ကာပူလည်း ပန်းပန်နေနိုင်မှာပါ။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်စရာရှိတာတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှ အလွမ်းသယ်နေစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။
သူများတွေယုံကြည်သလို ကောင်းကင်ဘုံမှာ ကျနော်နဲ့ကျနော့်ဇနီး ပြန်တွေ့ရမယ် လို့လည်း မယုံကြည်ပါဘူး။
သူလည်း ပြာအိုးပဲကျန်တယ်၊ ကျနော်လည်း ပြာအိုးပဲ ကျန်ရစ်မှာပါ။
(From One Man's View of the World)
လီကွမ်းယုက ဘာမှ ပြန်ပြောလို့မရအောင် ခေါင်းမာတဲ့လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး
SINGAPORE: Mr Lee Kuan Yew, who was Singapore’s first Prime Minister when the country gained Independence in 1965, has died on Monday (Mar 23) at the age of 91.
Hard Truths ကို နားဝင်မချိုတဲ့အမှန်တရားများ (May not be music to your ears) လို့ ဘာသာပြန်ထားကြောင်းပြောတော့ မစ္စတာလီရဲ့ စကားတွေကို တိုက်ရိုက်ပဲ ဘာသာပြန်စေချင်ကြောင်း၊ အနုအရွတွေနဲ့မဖွဲ့နွဲ့စေလိုကြောင်း လီကွမ်းယုရုံးက အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Hard Truths နဲ့ Tough Love စကားလုံးနှစ်လုံးကို တိုက်ရိုက် မြန်မာပြန်ဆိုလို့ လုံးဝ မရနိုင်ကြောင်း သူတို့ကို ပြန်ရှင်းပြခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒီတော့လည်း We understand ဆိုပြီး လီကွမ်ယုရုံးက လက်ခံသွားပါတယ်။
လီကွမ်းယုက ဘာမှ ပြန်ပြောလို့မရအောင် ခေါင်းမာတဲ့လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
လီဗာပူလ် ၀၊ မန်ယူ ၂
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 3/22/2015 - No comments
ဒုတိယပိုင်း ၄၅ စက္ကန့်နဲ့ စတိဗ် ဂျီ အနီကတ်ထိ။ မတန်ဘူး။
လီဗာပူးအတွက် မန်ယူက စပိန်သား မက်တာက ရီယယ်လီ မက်တာ ဖြစ်နေတယ်။
မရလောက်တော့ဘူး။ ၁၂ ယော်ချင်းကတည်းက ကွင်းလယ်မှာ မန်ယူက ချုပ်ထားတာ။
အိမ်ကွင်းမှာ လီဗာပူးလ် ဒုတိယမ္ပိ ရှုံးတော့မယ်။
နိုး မိုး(ရ်) ဗိုင်အိုလင့်စ် ပလိစ်
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 3/22/2015 - No comments
လေဒီးစ် အင်ဒ် ဂျင်တဲလ်မဲန်း
ကမ္ဘာ့ ဘယ်နေရာမှာပဲ ရွာရွာ
တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စာနာတဲ့ နှလုံးသားတိုင်းကို
အကြီးအကျယ် စွတ်စို ထိခိုက်စေတယ်။
သူတို့ရဲ့ မခြောက်သေးတဲ့ မျက်ရည်နဲ့
No violence စာတန်းကို
No more please လို့ ဆုတောင်းကြတယ်။
"ဘုန်းဘုန်းလည်း လာလေ" တဲ့
အဟိံသတရားက တို့ဘုရား လက်ကိုင်ပေါ်လစီလေ
ဘယ်လိုသမုဒယနဲ့မှ ဆွေမျိုးစပ်လို့ မရဘူး။
နိုး မိုးရ် ဗိုင်အိုလင့်စ် ပလိစ်
ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ငတ်မွတ်လို့။ ။
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 3/21/2015 - No comments
၁။ အရှင်သာရိပုအသားဖြူပြီး အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ကို ညိုထားတယ်။ စာပေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်။ ဒီလို ကွဲပြားမှုမျိုး မြန်မာပန်းချီတွေမှာ သိပ်မတွေ့ရသေးပါဘူး။
၂။ မြန်မာပန်းချီတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်း၊ ပတ္တမြားစောင်းတန်းရယ်လို့ ကွဲပြားနေမှုမျိုးလည်း သီဟိုဠ်ပန်းချီမှာ မတွေ့ရပြန်ဘူး။ အလေးထားပုံ မတူညီမှုလို့ ယူဆရပါတယ်။
ကမ်းလက် shares အောင်ဆန်းရာပြည့်'s post.
in ဇင်ဝေသော်, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 3/20/2015 - No comments
ရှယ်မရလို့ ကော်ပီ၊ ပေ့စ်။
"အောင်ဆန်းရာ ပြည့်ပွဲမှရှိသော ငွေ ၇၆.၆ သိန်းကျပ်အား ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းရံပုံငွေသို့ လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။"
ထရန်စဖောင်းမားရဲ့ နေညိုချိန် အစစ်ပါ
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 3/20/2015 - No comments
အရေးကြီးတာတွေ မှန်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်
၀င်နေလို့ရတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ မရှိသေးဘူး
သေချာတယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ၀မ်းနည်းနေကြလိမ့်မယ်။
မမြဲခြင်း ခြေနင်းတွေ ၀တ်ဆင်လို့
သူ့သားရဲ့ နိမိတ်ပုံကို ဖတ်တော့လည်း
Let me go ဆိုသူကို
Let him go နဲ့ ကြိုးလျှော့ထားဟန်ပါပဲ။
အင်း ၉၂ ဆိုတော့လည်း
သူတို့ပြောတဲ့ နှစ် ၅၀ ဆီကိုပဲလား
ဖွဖွရွတ်ရင်း ပွားတာပေါ့လေ။ ။
တရုတ်လွှမ်းမိုးမှု - လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ (ဒု) အခန်း (၉) မိတ်ဆက် (၂)
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 3/19/2015 - No comments
၁။ အင်အားကြီးလာတဲ့တရုတ်နဲ့ အညံ့ခံပေါင်းမလား
၂။ တရုတ်ကိုအာခံ၊ ပါဝါချိန်ခွင်လျှာ ညှိယူမလား။
၃။ နှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းစပ်ပြီး ကျင့်သုံးမလား။
အာရှရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရဆိုရင်တော့ တရုတ်ကို အညံ့ခံပြီး ပေါင်းကြ မယ့် သဘောရှိတယ်။ တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စီးပွားရေးအရ လွှမ်းမိုးမှု ရ လာ ပြီးတဲ့နောက် စစ်ရေးအရ လွှမ်းမိုးနိုင်ရေးဆီကို ခြေလှမ်းပြင်နေလျက် ပဲရှိတယ်။
ဟုတ်ပြီ။ တရုတ်နဲ့ ဟန်ချက်ညှိဖို့၊ ပါဝါညှိဖို့ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံက ဦးဆောင် မှာလဲ။
ဂျပန်လား၊ အမေရိကန်လား၊ ဗီယက်နမ်လား။
ဗီယက်နမ်က တရုတ်နဲ့ အင်အားညှိဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အာစီယံထဲကို ဝင်ခဲ့ပေ မယ့် အာစီယံကိုယ်တိုင်က တရုတ်နဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ရဲလို့ ဗီယက်နမ် အ တွက် အဆင်မပြေနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး အင်ဒို-သြစတေးလျ မဟာ မိတ်ကလည်း တရုတ်ကို ပါဝါ ညှိလာနိုင်ပြန် ပါတယ်။
အင်အားညှိရာမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုကို သူကထုတ်ပြပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ တစ်။ ။ (က) နဲ့ (ခ)ဟာ အဓိကအားပြိုင်သူတွေ၊ ဒီအခြေအနေမှာ (က)ရော(ခ)ကပါ (ဂ) (ဃ) (င)တို့နဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားကြမယ်။ စစ်လက်နက်တွေ အပြိုင်အဆိုင် တပ်ဆင်ကြမယ်။ ဒီပွဲမှာ (က)နဲ့ (ခ) ဟာ အဓိက ပါဝါညှိနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (က=ခ)
ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်။ ။ ဒေသတစ်ခုမှာ (က) က သိသိသာသာကြီး သူများထက် အားပို ကောင်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့် (ခ)နဲ့ (ဂ)တို့ရဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုက အင်အား ကောင်းလာနိုင်လို့ (က)ကိုယ်တိုင် (ခ) နဲ့ (ဂ)ကြားထဲကိုဝင်ပြီး အင်အားညှိ လာပြန်တယ်။ ဒီမှာတော့ (ခ) + (ဂ) = (က) ဖြစ်နေပါတယ်။
အင်အားကြီးနဲ့ ပြေးပေါင်းရာမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ အချက် သုံးချက် လိုတယ်။
၁။ ကိုယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ စူပါ ပါဝါနိုင်ငံကြီးဟာ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းအရ ကိုယ်နဲ့ တူနေမယ်ဆိုရင်
၂။ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုလည်းရှိမယ်ဆိုရင် (ဒီနေရာမှာ ညီအကို သီအိုရီကို ထုတ်ပြပါတယ်။ ညီငယ်ဟာ အိမ်တွင်းမှာ အကိုကြီးဖြစ်သူနဲ့ ရန်တကျက်ကျက်ဖြစ် နေပေမယ့် အပြင်ထွက်လို့ သူစိမ်းရွယ်တူတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ အကိုကြီးကို အားကိုး လိုက်မိတတ်တယ် ဆိုတဲ့သဘောပါ)
၃။ နောက်ဆုံး အာရှနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပူးပေါင်းမှုတွေမှာတော့ ပေါင်းလိုက်၊ ကွဲလိုက်တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အတူတကွ ပူးပေါင်းရေးမှာ အချင်းချင်းယုံကြည်မှုက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ တစ်နိုင်ငံအပေါ် တစ်နိုင်ငံ ယုံကြည် မှုက တော်တော်ကြီး အားနည်းနေတယ် လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ (ဒီအထဲမှာ နယ် မြေအငြင်းပွားမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်)
ဂျပန်ကပဲ အမေရိကန်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တရုတ်ကို အင်အားညှိမလား။ ဒါဆိုရင် ဂျပန်က ဒီအချက်သုံးချက်ကို အရင်တွက်လိမ့်မယ်။
၁။ အမေရိကန်က စူပါ ပါဝါကြီးအနေနဲ့ ဆက်ထိန်းထားနိုင်မလား
၂။ တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကို ဟန့်တားရာမှာ အမေရိကန်က တကယ်ရော တက် တက်ကြွကြွပါဝင်မှာလား။
၃။ သူပါဝင်တယ်ဆိုစေဦးတော့ အကုန်အကျသိပ်များ၊ အသေအပျောက် သိပ် မများဘဲ တရုတ်ကို ထိန်းထားနိုင်မလား။
အဲ့သလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဂျပန်က တရုတ်ကို ပါဝါမညှိဘဲ တရုတ်နဲ့ အပေး အယူလုပ်ပြီး ပေါင်းလိုက်မယ့်သဘောပါ။ (အပေးအယူဆိုတာ စီးပွား ရေးအရ ဂျပန်က ဦးဆောင်၊ စစ်ရေးမှာ တရုတ်က ဦးဆောင် ဆိုတာမျိုးပါ)
၁။ အစ္စလာမ်-ကွန်ဖျူးရှပ် မဟာမိတ်နဲ့ အနောက်။
အစ္စလာမ်နဲ့ အနောက်ကြားမှာ ဒေသဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေ အမြဲ ရှိနေ နိုင်ပြီး ကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့တော့ အလားအလာသိပ်မရှိပါဘူး။ တကယ် တန်း ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကွန်ဖျူးရှပ်အုပ်စုနဲ့ အနောက်အုပ်စုကြားမှာ ဖြစ်ပွားဖို့ ရှိနေတယ်။
အစ္စလာမ်တွေဆီက ထွက်လာတဲ့လေသံတွေအရ အနောက် (အမေရိကန် ဦးဆောင်) အုပ်စုဟာ ပထမ ဆိုဗီယက်ကို ဖြိုခွဲတယ်။ အခု တရုတ်နဲ့ ကွန်ဖျူး ရှပ် မိသားစုကို ဖြိုခွဲဖို့လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စ အောင်မြင်သွားရင် အစ္စလာမ် ကမ္ဘာကို ဖြိုခွဲလိမ့်မယ် ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့အားလုံးဟာ တရုတ်နောက် ကနေ တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံကြမယ်။ အနောက်အုပ်စုကို တန်ပြန်မယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တရုတ်ကတော့ ဘာမှ ဖွင့်ပြောတာမျိုး မရှိပါဘူး။
အစ္စလာမ်-ကွန်ဖျူးရှပ် မဟာမိတ်ဟာ အနောက်အတွက် အန္တရာယ် ရှိပြီး အခန့်မသင့်ရင် ကမ္ဘာစစ်ပုံစံအထိ ရောက်သွားနိုင်ကြောင်း ဟန်တင်တန်က နိမိတ်ဖတ်ထားပါတယ်။
၂။ မြောက်အမေရိက၊ အာဖရိကနဲ့ အနောက်
သူတို့က အနောက်ကို ခြေရာတိုင်းဖို့ စီးပွားရေးအင်အား၊ စစ်အင်အား မရှိဘူး။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာတွေမှာ အနောက်ကို ဆန့်ကျင် ကောင်း ဆန့်ကျင်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း အနောက်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ သူတို့မှာ အင်အားအလုံအလောက်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ အနောက်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ယေဘုယျ ချောမွေ့ဖို့ရှိနေပါတယ်။
၃။ လေယူရာယိမ်း စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတွေနဲ့ အနောက်
လေယူရာယိမ်းဆိုတာ ရုရှား၊ ဂျပန်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ကို ရည်ညွန်းပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အနောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ ရှုပ်ထွေးနေပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ အချင်း ချင်းကြားမှာလည်း ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။
ဂျပန်နဲ့ရုရှားတို့ဆိုရင် ကုရိုင်းကျွန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နယ်မြေအငြင်းပွားမှု မဖြေရှင်းရသေးဘူး။
စစ်အေးကာလအတွင်းမှာ ရုရှားနဲ့တရုတ်က သီးသန့်ရှိနေခဲ့တယ်။ စစ်အေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အနောက်နဲ့ ပါဝါ တန်းညှိဖို့ သူတို့ နှစ်နိုင် ငံ ပြန်ပေါင်း သွားတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ရုရှားကလည်း တရုတ်-အစ္စလာမ် မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကို စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဝင်လာနေပြန်တယ်။ ဒါဆိုရင် ရုရှား ကိုယ် တိုင် အနောက်နဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။
အနောက်နဲ့ပေါင်းဖို့ဆိုရင် အနောက်ဆီက ဒါတွေကို သူမျှော်လင့် ထားပါလိမ့် မယ်။ ဒါသည်ပင် ရုရှားနဲ့ အနောက်ကြားက နားလည်မှုလို့ ပြောရင် လည်း ရပါလိမ့်မယ်။
၁။ အနောက်ပိုင်းရှိ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတွေကို နေတိုးအုပ်စုထဲ ဝင်ခွင့်ပြုဖို့၊ ယူကရိန်းသာ နှစ်ခြမ်းကွဲမသွားရင် နေတိုးက ရှေ့ဆက်မတိုးဖို့။ (ယူက ရိန်း နှစ်ခြမ်း ကွဲရင် အနောက်ခြမ်းက နေတိုးထဲမှာပါဝင်ပြီး အရှေ့ပိုင်းက ရုရှားထဲ ပါဝင်နေရ မယ်။)
၂။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုထားရှိပြီး စစ်အေးကာလတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ စစ်လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး သဘောတူညီမှုဥပဒေကို အနောက်က ပြန်လည် စီစစ်ပေးဖို့
၃။ အော်သိုဒေါက်(စ်)နိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သတ်သမျှ အရေးကိစ္စတိုင်းကို ဖြေရှင်း ရာမှာ ရုရှားဟာ အဓိကအခန်းက ပါဝင်ခွင့်ရှိသူဆိုတာကို အနောက်က အသိ အမှတ်ပြုပေးဖို့။
၄။ မွတ်စလင်တွေဆီက ရောက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေရှိနေလို့ ရုရှားရဲ့ စစ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုကို အနောက်က နားလည်ပေးဖို့
၅။ ဘော့စနီးယားလို ကိစ္စမျိုးမှာ အနောက်နဲ့ အတူ ရုရှားပါ ပါဝင်ခွင့်ရှိဖို့ ဒါတွေကို ရုရှားက မျှော်လင့်၊ တောင်းဆိုမှာ အမှန်ပါပဲ။
တတိယ လေယူရာယိမ်းနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ။
အိန္ဒိယနဲ့ အနောက်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အများအားဖြင့် ချောမွေ့ ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတရုတ်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ပိုမိုကောင်းမွန် လာနိုင်ပါ တယ်။ နောက်ပြီး တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယက ယဉ်ကျေးမှု အဓိက ပြိုင်ဖက် တွေဖြစ်နေကြတယ်။ နောက်ဆုံး တရုတ်-အစ္စလာမ် မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကို စိုးရိမ်နေရလို့ အိန္ဒိယနဲ့ အနောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ပိုလို့တောင် နီးကပ် ကောင်းမွန် လာနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဆက်ဆံရေး သုံးမျိုးကို နိဂုံးချုပ်ပေးထားပါတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 3/19/2015 - No comments
၁။ ဒီသတင်းမျိုးတွေ ဦးဦးရဲထွဋ်တို့ ဖတ်သင့်တယ်။ ဟွန်ဒူးရပ်က ကျောင်းသားတွေ စာသင်ချိန် ၅ မိနစ်တိုးလို့တဲ့ လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြလာပြကြတယ်။ သူတို့နဲ့နှိုင်းရင် မြန်မာကျောင်းသားတွေက အများကြီး အမျှော်အမြင်ရှိတယ်။ နောက်ပြီး မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြပါတယ်ဆို ဘယ်ကလာ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူရှိနေရဦးမှာလဲ။ ၅ မိနစ် စာသင်ချိန် တိုးလို့တဲ့။(ဖိုက် မိနစ်တဲ့နော်။ မျက်စိမှားတာ မဟုတ်ဘူး)
၂။ မိခင်နို့သောက်ရတဲ့ကလေးက ဥာဏ်ပိုကောင်းသလို လစာလည်းပိုရ၊ ပိုလည်း ချမ်းသာတတ်သတဲ့။ ယုံတစ်ဝက် မယုံတစ်ဝက်ပဲ။ ကိုယ်တိုင် အမေ့နို့စို့ခဲ့ရပေမဲ့ ဒီနေ့အထိ ဦးတေဇလောက် မချမ်းသာဘူးဖြစ်နေတယ်။ စမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် အရင်းရအောင် ယုံထားလိုက်တယ်။ သုတေသန လုံးဝမှားသွားရင်လည်း စိတ်မကောင်းစရာ။
၃။ မန်စီးတီးလည်း ချန်ပီယံလိဂ်က ထွက်သွားပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပရီမီးယားလိဂ် ကိုယ်စားပြုအသင်းတွေထဲ မန်ယူမပါလို့ကတော့ မကွာတားခင် ပြုတ်နေတတ်ကြတာပါပဲ။ ချယ်လ်ဆီး၊ အာဆင်နယ်နဲ့ မန်စီးတီးဆိုတာက ဆရာ့ဆရာကြီးတွေပွဲမှာတော့ လူရာ တယ် မ၀င်သေးပါဘူး။ သဘောမတူလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါက ဒီနှစ် တကယ်ဖြစ်နေတာတွေ။
သမ္မတကြီး အောင့်သက်သက်ပြန်ရပြန်တဲ့ စင်္ကာပူ ဒုတိယအခေါ...
အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ ခံယူသွားသူကိုတော့ သူ့လုပ်ရပ်...
မစ္စတာလီရဲ့ နောက်ဆုံးစာအုပ် "လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြ...
Mr Lee soundingagiant bell onavisit to the Shw...
My lecture note - Dependent Origination (Paticcasa...
လုပ်မနေနဲ့၊ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်ချင်ခဲ...
လီကွမ်းယုက ဘာမှ ပြန်ပြောလို့မရအောင် ခေါင်းမာတဲ့လူမ...
တရုတ်လွှမ်းမိုးမှု - လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ (ဒု) အခန်း ...
ဒါကတော့ အင်္ဂါ သား သမီးတွေကို အရှက်ခွဲတာပဲ။ ငြိမ်နေလ...
အခုမှ တင်ဖြစ်တဲ့ စာ
Buddha Bar ဆရာတွေ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ခွ...
Hell to hell is free
ဘယ်စာအုပ်က အကျိုးကျေဇူး အများဆုံးလို့ထင်ပါသလဲ
ပိတောက်ပွင့်သစ်ထဲက ဒေါက်တာချမ်းရဲ့ ဆောင်းပါးပါ
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ (ဒု) အခန်း (၉) မိတ်ဆက် (အကျဉ်း...
တရုတ်ကို လေးစားသလို ပြည်သူကိုလည်း လေးစားသင့်တယ်
မိသားစုဘဝ အေးချမ်းဖို့ BMCA သင်တန်းသွားကြစို့
Accusation, defaming and criticism.
ဒေါ်အေးနှင့် မြေးမလေးအကြောင်း (Mudita Shwe Kyaung)
အစိုးရက စကားစစ်ထိုးဖို့ထက် (တကယ့်) ဥပဒေဘောင်ထဲက အလ...
ဟဲ ဟဲ လူရွှင်တော်တွေ ပျက်သလို ဘုရားဆီက အကြွေးရရန် အ...
မလေးရှားရောက် ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မြင်တွေ့လာကြရမယ့် ကရု...
မြေးလေးက ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ်ဆိုတော့
"ဇင်" ပါရင် မခေတော့ဘူး။ (ဖျာ ဝင်ခင်းသည်)
အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ လူပန်း
ကသောင်းကနင်းခေတ်ဆီ ဦးတည်နေတဲ့ နိုင်ငံဆိုပါလား
ကမ်းကြည့်ငှက်တစ်ကောင်၏ နိုင်ငံရေး ဝိပသနာ
ဦးဦး (မရဲတရဲ) ထွဋ်
နားဝင်မချိုတဲ့ အမှန်တရားကို .... နားဝင်မချိုတဲ့ လက...
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ၊ ဒု တွဲ။ အခန်းကြီး လေး၊ အခန်းင...
တကယ် ၀မ်းနည်စရာက လူကြီးတွေ အလင်းကြောက်တဲ့ ကိစ္စ
ထိုင်းဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးထဲ ပါသင့် မသင့်တဲ့
ကျေနပ်တယ်။ ကြည်နူးတယ်။ ရယ်ရတယ်။
အကူးအပြောင်း အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ကျရှုံးခြင်း
ဖရင့် မျိုးကြီးဝေါပေါ်က ပုံပါ။ ရှဲ မရလို့ ကော်ပီ၊ေ...
မှန်ရင် လက်ခုပ်သံ ရပါတယ်
မြေ ကောင်း၊ မကောင်းကို မြက်ညှိုး၊ မညှိုးကိုမြင်သဖြ...